Sawirro: Maxay kawada hadleen Farmaajo iyo Yuweri Musaveni? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Maxay kawada hadleen Farmaajo iyo Yuweri Musaveni?
Sawirro: Maxay kawada hadleen Farmaajo iyo Yuweri Musaveni?
Nairobi (Caasimada Online)-Madaxweynaha JFS Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay kullan Khaas ah magaalada Nairobi kula qaatay dhigiisa dalka Ugandha Ugandha Yuweri Musaveni.
Madaxweynaha Somalia iyo Dhigiisa Ugandha ayaa ku kulmay magaalada Nairobi oo ay uga qeybgalayeen Shirka Madaxda IGAD oo diirada lagu saaraayay Arrimaha Somalia.
Labada Madaxweyne ayaa si gaara uga wada hadlay Arrimaha Siyaasada, Amniga iyo xoojinta xiriirka labada dalka, waxa uuna Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo dhigiisa warbixin kooban kasiiyay xaalada Somalia.
Madaxweynaha Somalia Farmaajo ayaa Yuweri Musaveni ka dalbaday inuu xoojiyo xiriirka kala dhexeeya Somalia, waxa uuna u cadeeyay inaanu jirin tashwiish ay Somalia ka muujineyso xiriirka gaarka ah ee Somalia kala dhexeeya Ugandha.
Yuweri Musaveni, ayaa dhigiisa Somalia u ballanqaaday inay meesha ka saari doonaan Tashwiishka muuqda waxa uuna ballanqaaday inuu laba jibaari doono xiriirka dhinacyada Siyaasada iyo Amniga.